မှောင်မိုက်၌ glows တဲ့လုံခြုံချော်ရည်ဆီမီးခွက်စေရန်ဘုံအိမ်ထောင်စုပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ ဒါဟာသင် glows တဲ့ရေ-based အရည်ကိုသုံးမယ့်အစားအစားအစာအရောင်နှင့်အတူရေ coloring ၏ မှလွဲ. နာမည်ကျော်ရေနံနှင့်ရေချော်ရည်ဆီမီးခွက်ပေါ်တွင်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလပ်စတစ်ပုလင်း (20 အောင်စသို့မဟုတ်2လီတာပုလင်းကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်)
အနက်ရောင်အလင်း (optional ကိုဖြစ်ပေမယ့်ပင်မီးအရည်တဦးတည်းနှင့်အတူတောက်ပနေကြသည်နိုင်ပါသည်)
ယင်းချော်ရည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် glows တစ်ခုသို့မဟုတ်အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာ glows ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရွေးချယ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျရဲဆေးသုတ်သုံးလျှင်တောက်ပအလင်းဖို့ချော်ရည်ဆီမီးခွက်ဖော်ထုတ်, မီးထွက်လှည့်နှင့်အမှန်တကယ်မှောင်မိုက်၌တောက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အတောက်ပအရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြမှင်ရဲနေသည်။ သင်မီးမောင်းထိုးပြထဲကမှင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသေချာမသိကြလျှင်, ငါရှိတယ် ညွှန်ကြားချက် ။ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းလွန်အလင်းထိတွေ့သောအခါဤမှင် (နှင့်သင့်ချော်ရည်ဆီမီးခွက်) တောက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးမီးရေကြီးတွေဇွန်း (သို့မဟုတ်ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့ရဲအရည်) ထည့်ပါ။
သင်ချော်ရည်, စီးဆင်းအပိုင်းပိုင်းသို့ seltzer တက်ဘလက်ကိုချိုးဖျက်နှင့်ပုလင်းဖို့အပိုင်းပိုင်း add ရန်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအခါ။
ပုလင်းဦးထုပ်နှင့် '' ပဉ္စလက် '' ပျော်မွေ့။
သင်ပိုမို seltzer တက်ဘလက်တုံးထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ချော်ရည်ဆီမီးခွက်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ရေနံနှင့်ရေ (သို့မဟုတ်တစ်ရေ-based အရည်) ကြောင့်အဆိုပါ globules ဖွဲ့စည်းရန် immiscible ။
ရေတစ်ဝင်ရိုးစွန်းမော်လီကျူးနေစဉ်အဆိုပါရေနံတစ် nonpolar သဘာဝရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ပုလင်းကိုလှုပ်ဘယ်လောက်, နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုအမြဲခွဲခြားပါလိမ့်မယ်။
ကို 'ချော်ရည်' '၏လှုပျရှားမှု seltzer တက်ဘလက်များနှင့်ရေများအကြားတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပုံစံများကိုအရည်၏ထိပ်မှထကဖြန့်ဝေစေတော်မူသော, သှ။
ယင်းချော်ရည်၏အလင်းရောင်သင်အသုံးပြုတဲ့ဓာတုပေါ် မူတည်. င်း၏သို့မဟုတ်ချောင်းဖြစ်စေထံမှလာသည်။ တစ်ဦးပစ္စည်းစွမ်းအင်စုပ်ယူနဲ့ချက်ချင်းနီးပါးအလင်းဖြန့်ချိသည့်အခါချောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအနက်ရောင်အလင်းချောင်းပစ္စည်းများရဲကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါအသုံးပြုသည်။ င်း၏တစ်ဦးင်း၏ပစ္စည်းအလင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုသည်ကိုတစ်ကြိမ်ကတိကျတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပေါ် မူတည်. အများအပြားစက္ကန့်, မိနစ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်နာရီတောက်ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်ဒီတော့စွမ်းအင်, အလင်းကဲ့သို့စုပ်ယူနိုင်ပြီးဖြန့်ချိသောတစ်ဦးနှေးကွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲ-a-Sketch Thermite Make ရန်ကဘယ်လို
High School တွင်သိပ္ပံစမ်းသပ်မှု
အပြာရောင် Borax Jewel နှင့်ပုတီးစေ့စမ်းသပ်ခြင်း
5 နှင်း Ice Cream ချက်ပြုတ်နည်း
တစ်ဦး Balance အသုံးပြုခြင်း Mass တိုင်းတာရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး Predicative နာမဝိသေသနဆိုတာဘာလဲ
(စတငျ, Start ကိုစတင်ရန်) 'တင်သည့်' 'Conjugate လုပ်နည်း
အဘယ်မှာကာတွန်း Theme သီချင်းများနှင့်အသံ Download မှ
ခုနစ်-Card ကိုလုံး Play ရန်ကဘယ်လို
ရေ Oak, မြောက်အမေရိကတစ်ဦးကအဖြစ်များသည့်သစ်ပင်
ဘယ်လိုတစ်ဦးအံ့အားသင့်စေခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောအစားထိုးဆရာ Be မှ
Tracy လက်တ '' ": Osage အဘိဓါန်ကောင်တီသြဂုတ်လ" မှဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Themes
တစ်ဦး Lab က Notebook ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ကဘယ်လို
အမရေိ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏ Soka တက္ကသိုလ်
Kesha ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ ဒေါက်တာလုကာ: အအငြင်းပွားမှုတွင်အသေးစိတ်
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း Loverboy သီချင်းများ
7 အများစုမှာစတိုင်က Hip-Hop နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မတ်မတ်
ရယ်စရာ Tricks သို့မဟုတ်တဟီဟီရယ်နှင့် Chilling ကိုယူခဲ့ဖို့စကားဆက်ဆံ